Maaskarada clothes Dharka shaqeynta • Xirfadlaha kombiyuutarka ee P&M
Maaskaro ilaalin ah waxay si weyn gacan uga geysan karaan kahortaga faafitaanka cudurada faafa ee qaar ee habka neefsashada. Iyagu waa gaashaan fiican u ah habka neefsashadayada. Maaskaro noocan oo kale ah, oo daboosha sanka iyo afka, ayaa ka hortagaysa marin u helista xeryo waxyeello leh, laakiin waxay sidoo kale ka hortagtaa gacmaha wasakhaysan inay taabtaan wejiga. Xitaa sidaas oo ay tahay, xirashada maaskaarku ma dammaanad qaadayo kahortaga cudurka.
Adeegsiga maaskaro difaac ah waa in lagu daraa tallaabooyin kale oo looga hortago infekshinka.
Mid ka mid ah xeerarka ugu muhiimsan waa u hoggaansanaanta nadaafadda gacanta iyo nidaamka neefsashadaiyo sidoo kale ka fogaanshaha xiriir dhaw, waxaa ugu wanaagsan inaad ka fogaato ugu yaraan hal mitir kuwa kale. Markii aan adeegsanno xeerarkan yar ee fudud waxaan si weyn u caawineynaa nafsadeena inaan ka fogaano taabashada fayraska.
Maaskaro ilaalin ah ayaa loo qaybiyaa:
la tuuri karo
dib loo isticmaali karo
Inta badan waxay kuxirantahay shey laga tolay. Maaskaro ahaan sida qayb ka mid ah dharka labiska ayaa qayb ka noqon kara dharka maalin kasta ee shaqaalaha loo baahan yahay. Kuwa sida caadiga ah laga helo farmasiiyada ayaa laga sameeyay nonwovens, goyn toos ah oo ay fududahay in la gasho, laakiin waa in la tuuraa ka dib isticmaalka ugu horreeya.
Maaskarada difaaca Suufka jilicsan ee jilicsan ee madow oo laga heli karo dukaankeena internetka >>
Maaskaro cudbi ka samaysan Waxay yihiin kuwo aad u badan oo wax ku ool ah oo ay ku filan tahay in lagu kululeeyo iyaga heerkul sarreeya si ay awood ugu yeeshaan inay dib u isticmaalaan. Si tan loo sameeyo, waxay ku filan tahay inaad ku maydho 60 digrii, waxaad sidoo kale ku sumayn kartaa iyaga adigoo birta xoogga ugu sareeya ama ku karkaraya biyo karkaraya. Sidoo kale, ku tirtiridda maaskarada diyaarin lagu sameeyo ugu yaraan 70% aalkolo ayaa noqon doonta mid waxtar leh. Kaliya ku buufi maaskaro dareeraha oo sug ilaa uu qalajiyo.
In kasta oo fikirka baahsan ee ku saabsan wax-ku-oolnimada maaskaro ilaalinta, waxaa habboon in fiiro gaar ah loo yeesho xaqiiqda ah in xitaa maaskaro aan xasilooni lahayn ay abuuri karto jaakad ilaalin ah, oo u dhiganta saameynta masaafada lagu taliyay ee 2 mitir ee xiriirada dadka dhexdooda ah.
Sidee loo xidhaa waji xidhka wajiga markii loo baahdo saacado badan?
Nasiib darrose, inbadan oo naga mid ah, xirashada maaskaro waa waxoogaa mashquul ah, gaar ahaan dhowr saacadood maalintii. Ka dib waxaad dareemi kartaa neefsasho ama hurdo-la'aan oksijiin yar awgeed.
Si loo yareeyo raaxo darrada ay keento xirashada maaskaro si joogto ah, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad xasuusato sharciyada fudud. Marka hore, xiro maaskaro kaliya haddii ay lagama maarmaan tahay. Hadaanan xiriir la laheyn dadka dibada ka yimid oo aan joogin goobaha caamka ah, way u qalantaa inaad soo dejiso, xitaa dhowr daqiiqo. Fasax gaagaaban ayaa kuu oggolaanaya inaad nasato oo oksijiin gasho.
Waxa kale oo mudan in la helo dhawr waji oo dib loo isticmaali karo. Istaatistikiyan, hal qof wuxuu iibsadaa qiyaastii 8-10 waji (oo wuu iibsadaa markay daashadeen), si ay ubadali karaan maalintii oo ay u dhaqi karaan - taas oo u dhiganta sida aan ku iibsanno nigis. Haddii ay tahay inaan joogno meel xiran, sidoo kale waxaa habboon in daaqadda la furo oo si qoto dheer loo neefsado. Waxaan ogaan doonnaa faraq ku saabsan sida aad dareemeyso marar badan.
Maaskarada daruuriga ah ee buluugga ah ee afka iyo sanka laga heli karo bakhaarkayaga internetka >>
Sidee maskaradu noogu caawin karaan nolol maalmeedka?
Maaskaro waxaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo nidaamka neef-mareenka. In kasta oo ay korodhay caannimada ay keentay masiibada, hadana waxaa mudan in fiiro gaar ah la yeesho iyadoo duruufaha kale ee isticmaalkiisu ay sidoo kale naga caawin doonaan ilaalinta caafimaadka.
Bilooyin badan waxaan si joogto ah uga heli jirnay wararka ku saabsan midka hadda ka socda warbaahinta warbixin ururinkaas oo aad ka arki karto koror gaar ah oo wasakheysan inta lagu jiro xilliga kuleylka. U fiirsashadeeda sii kordheysa ayaa ah tan ugu khatarta badan agglomerations leh awood ballaaran oo gaadiid iyo dhir warshadeed.
Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, dadka deggan magaalooyinka waaweyn ee adduunka ayaa muddo badan isticmaalayay waji-xidhka wajiga. Dhanka, xilliga gu'ga iyo xagaaga, waxaa nalooga soo gaarayaa noocyo kala duwan oo buufis ah, halkaas oo loo adeegsado wakiilada difaaca geeda kiimikada ama kahortagga kaneecada, shilinta iyo cayayaanka kale. Sidoo kale marka la nadiifinayo guriga, gaar ahaan nadiifinta guud iyadoo la adeegsanayo saabuun xoog leh, waa inaan isticmaalnaa maaskaro si aan u ilaalinno mareenka neef-mareenka, si aanaan u neefsan uumi-baxyada waxyeellada leh.
Maaskaro wajiga AasiyaWejiyada BielendaWaji xidhka wejiga BielendaMaaskaro waji waji lehwaji wanaagsan waji xidhkawaji xidhka wanaagsan ee Rossmannmaaskaro guriga ahMaaskaro wejiga ka samaysan oo wajiga lagu sameeyoMaaskaro guryaha lagu sameeyo oo lagu buufiyo finankaMaaskaro wejiga ka samaysan oo wajiga lagu sameeyowaji-samaynta waji-samaynta wejigaMaaskaro guri madow oo wajiga lagu duubtoMaaskaro timaha guriga lagu sameeyoMaaskaro wajiga lagu daboolo oo duuduub ahdawooyinka guriga ee waji-celinta wajigafacials hebewaji waji wajisida loo sameeyo xawaaraha iyadoo aan lahayn koollo iyo maaskarowaji xidhka wajiga kugula talinMaaskaro wajiyada Jabbaan ahMawjadaha KuuriyadaMaaskaro wajiga KuuriyadaDukaanka wejiga daboolka leh ee Kuuriyadalomi lomi facialsmaaskaroMaaskarooyinka anti-sigaarkaMaaskaro qalliinwaji-xidhka raggawaji wajiwaji waji wajiwaji waji wajiagafia babushka waji-xidhkawaji wajiWaji xidhka wejiga Bielendawaji waji wajiwaji xidhka wajigaMaaskaro wejiga ka samaysan oo wajiga lagu sameeyoMaqaarka wajiga ee Hebenadiifinta waji xidhkawaji ka waji dib u eegiswaji waji wajiwaji xidhka wajiga rossmannMaaskaro wajiga Sephora ahmaaskaro wajiga lagu daboolowaji gashida wejigaMaaskaro wajiga lagu daboolowaji xidhka wajigawaji xidhka wejiga xayawaankawaji xidhka timahamaaskaro guriga ahmaaskaro wajiga lagu dhaqoMaaskaro la isticmaali karoMaaskaro Kuuriyaan ahwaji xidhka waji wajigaMaaskaro caafimaadMaaskaro dufanka lehwaji wajiMaaskaro wajiga lagu qurxiyomaaskaro madowwaji xidhka timahaMaaskarooyinka qoyaanwaji kareemka wajigaMaaskaro wejiga lagu maydhisto oo wejiga lagu dhaqoMaaskaro ilaalin ahnadiifinta maaskaroMaaskaro wajiga lagu nadiifiyowaji waji leh oo waji lehdiirka ka saarmaaskaro indhahaMaaskaro rossmann ahMaaskaro Mashruuca selfiemaaskaro xaashi ahlakabyo xajmi ah 50 gogo 'lakabyada waji-goyntawaji-dhaafinta waji-xidhka wajigawaji xidhka wejigamissha facialsmaaskaro ugu fiicanwaji xidhka ugu fiicanMaaskaro dabiici ahMaaskaro wajiga dabiiciga ahMaaskaro wajiga dabiiciga ahwaji kareemka wajigadharka xayeysiintaburush u isticmaal maaskaroMaaskaro wajiga lagu taliyowaji xidhka wajigacuntada sida waji-wejiga wejiga lagu buuxiyowaji xidhka wejiga rossmannwaji xidhka wejiga rossmannMaaskaro wajiga Ruushkawajiga sephoraMaaskaro wejiga daboolamaaska79 maaskarowaji waji leh oo waji fiican lehMaaskaro wajiga raqiis ah